Iindlela ezintlanu zokuNyusa uMdlalo wokuThengisa uMxholo | Martech Zone
Iindlela ezintlanu zokuNyusa uMdlalo wakho weNtengiso
NgoLwesibini, Aprili 2, 2019 NgoLwesibini, Aprili 2, 2019 UMartha Jameson
Ukuba ubandakanyeka ekuthengiseni umxholo walo naluphi na uhlobo, usebenzisa isicwangciso. Isenokungabi sisicwangciso esisemthethweni, esicwangcisiweyo, okanye esisebenzayo, kodwa sisicwangciso-qhinga.
Cinga ngalo lonke ixesha, izixhobo, kunye nomzamo oya ekudaleni umxholo olungileyo. Akubizi kakhulu, ke kubalulekile ukuba ukhokele umxholo obalulekileyo usebenzisa isicwangciso esifanelekileyo. Nazi iindlela ezintlanu zokunyusa umdlalo wokuthengisa umxholo.
Yiba Nobulumko Ngezixhobo zakho
Ukuthengisa umxholo kungabiza, nokuba oko kuthetha ukuba utyala ixesha elininzi ekwenzeni umxholo, okanye ukuchitha imali uyikhuphela kubuchule kuyilo. Into ebiza kakhulu njengokuthengisa umxholo kufuneka ijongiswe ngobulumko kwaye ujonge ii-analytics yinxalenye enkulu yalonto.
Ngaba unokucinga ngokufaka kubo bonke oovimba ukuze ufumanise ukuba ubusityhala umxholo wakho kuFacebook xa uninzi lwentengiso yakho yayivela kwi-Instagram nakwiPinterest? Kubuhlungu oko; Kwaye ngekhe ube ngumntu wokuqala ukufumana loo nto. Thatha ixesha lokujonga uhlalutyo lweendaba ezentlalo ukuze ukwazi ukuhambisa umxholo wakho kumaqonga afanelekileyo nakubaphulaphuli.
Dibana neQela lakho rhoqo
Unokuba neqela elizinikele kwintengiso yomxholo, okanye akunakuba. Kuzo zombini iimeko, kubalulekile ukuba udibane kube kanye ngeveki kwaye uchukumise isiseko nabantu abanoxanduva lokwenza nokwazisa umxholo wakho. Ukuba unako, dibana yonke imihla.
Thetha ngayo nayiphi na into entsha esele yenziwe ukuhlangana kwakho okokugqibela. Jonga kwikamva kwaye unikezele imisebenzi kubantu abafanelekileyo. Xoxa ngezinto ezenziwa ngabantu okhuphisana nabo kunye nendlela onokuthi uphucule ngayo kumxholo wabo.
UBonnie Hunter, intengiso yebhlog kwi Australia2Write kwaye Bhala iMyX
Ezi ntlanganiso likwalixesha elihle lokudibanisa iintloko kunye nokwenza ingcinga. Zithini ezinye izihloko ezitshisayo ezihamba phambili neqela lakho elinokwakha umxholo ngeenxa zonke?
Yakha abaphulaphuli bakho
Gxila ekukhuliseni abaphulaphuli bakho. Umthetho omtsha uxela ukuba idatha kufuneka iqokelelwe ngemvume, oko kuthetha ukuba idatha ikhutshwa ngokuzithandela kwaye ayivunwa. Ukuthengisa umxholo kubaluleke ngakumbi ngokuza kwalo mthetho kuba umxholo olungileyo uyindlela elungileyo yokukhuthaza abantu ukuba banikezele ngovuyo ulwazi lwabo.
Xa abantu bewuthanda umxholo wakho, baya kunikezela ngedatha yabo kuba bafuna ukuqhubeka befumana izinto zakho. Cinga ngendlela esebenza ngakumbi ngayo imodeli engaphaya kokurhafisa i-intanethi yedatha yabantu abangakhathaliyo. Ikunika ithuba lokwakha ubudlelwane nabantu kwaye ubavumele bazive bexhumene nomxholo wakho.
UBilly Baker, umthengisi wentengiso e NgweBhut kwaye NextCourse.
Thatha ubushushu ekusebenzeni kweenzame zakho ngokujonga abaphulaphuli bakho, ujonge amanani akho xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, kwaye ubone ukuba inani lababhalisi bakho lihambelana kunye neenzame zokuthengisa umxholo.
Zibekele Usukelo Olufanelekileyo
Ukuba awazi ukuba zithini iinjongo zakho zokuthengisa umxholo, ungaziphumeza njani? Inxalenye enkulu yokumisela ezi njongo iya kusekelwa kwii-analytics zakho, imizekelo:
Leliphi iqonga ozenzela lona iinjongo?
Ufuna ukuba phi ngonyaka?
Ngaba uyafuna ukwandisa abalandeli bakho, emva koko bangaphi?
Okanye mhlawumbi ufuna ukwandisa ukusebenzisana komsebenzisi kunye nokugcwala. Nje ukuba ube nenjongo yakho enkulu yonyaka, lixesha lokuba uyihlukanise ibe ziinjongo ezincinci, ezifikelelekayo zenyanga. Oku kuya kuba ngamatye akho okunyathela ukufikelela kule njongo inkulu, ephambili. Inyathelo lokugqibela kukufumanisa ukuba yeyiphi imisebenzi yemihla ngemihla ekufuneka uyenzile emva kokwenza ezo njongo zikhulu ziyinyani.
Chaza ukuba uza kuyilinganisa njani impumelelo
Kuya kufuneka ulandele ukusebenza komxholo wakho ukuba ufuna ukwazi ukuba usebenza njani. Ngaba uza kulandelela iimetrikhi ezinzima ezifana nokuthengisa kunye nezikhokelo okanye ezithambileyo ezinje ngokubandakanyeka komsebenzisi kwimithombo yeendaba? Ezinye iimetriki ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuzilandelela ziimetrikhi zokusebenzisa (bangaphi abantu abajonga okanye abakhuphele izinto zakho), ukwabelana ngeemetriki, ukukhokelela kwimetriki yokuvelisa kunye neemetriki zokuthengisa.
Ukuthengisa umxholo ngumsebenzi onamandla ofuna ukulungela ukutshintsha isicwangciso xa into ingasebenzi. Kubalulekile ukuba neenjongo kunye nokwazi ukuba yeyiphi imilinganiselo yakho yokuphumelela. Ayibizi kakhulu, ke yiba nobulumko ngendlela ohambisa ngayo izixhobo zakho. Landela ezi ngcebiso zintlanu zokunyusa umdlalo wokuthengisa umxholo.
tags: umxholoUkuThengiswa kweMpahlaIqela lokuthengisa umxholoumlinganiso womxholoizixhobo zomxholoimpumelelo yomxholoiqela lomxholo
UMartha Jameson ngumhleli womxholo kunye neempazamo zokufunda Essayassistant.org kwaye IziFundo zeBrits. Ngaphambi kokufumana ukuthanda kwakhe ukubhala, uMartha wasebenza njengomyili wewebhu kunye nomphathi. Izinto eziphambili ngokubaluleka zisebenzisa amava akhe, inkuthazo kunye nolwazi ukunceda abafundi kwiiblogi ezinje Imvelaphi yokubhalwa.
I-blockchain -Ikamva leTekhnoloji yezeMali